Guddiga Ontario Securities ayaa ansixiyay fund ugu horeysay Kanada ee sarrifka-baayacmushtari blockchain (ETF), kaas oo ku dhow inuu ku bilowdo on Stock Exchange Toronto ee todobaadka soo socda.
Boortofooliyo Harvest, ah oo shirkad Canada ka madax banaan maamulka maalgashi, fayl waraaqaha hordhaca ah ee ay Blockchain Technologies ETF in January, dayaya in ay maal-Canadian fursad ay ku iibsan waaxda technology blockchain ah, sida ay Globe and Mail.
fund waa inay maalgashi “in securities sinaanta ee soo saara bandhigi, si toos ah ama si dadban in horumarinta iyo hirgelinta blockchain iyo teknoolajiyada ledgerka qaybiyey,” a Harvest war Boortofooliyo yiri. Shirkadda tala for ETF ah si ay ula socdaan blockchain mashaariicda technology, mirroring ay Harvest Blockchain Technologies Index.
Sida laga soo xigtay Globe and Mail, laba shirkadood oo kale oo Canadian, Boortofooliyo Trust First Kanada iyo xuubsiiban Funds Group Inc., ayaa sidoo kale doonaya in aan bilowno lacag blockchain, iyo gudbiyay prospectuses ugu horeysay la nidaamiyo Isbuucaan.
BitGo si ay u bartaan leheyn ...
Maxaa Yimaado for Price Seeraar ku Next?
Seeraar oo si kale ...
Salesforce CEO ku dhawaaqay qorshe wax soo saarka blockchain
Salesforce waxaa workin ...
Post Previous:Khasaaraha Rug Double xaaq Market Crypto Hantida
Post Next:The PHANTOM maamuuska cusub hillaac Network tartami doona